Vista's Colorful Planet: သွားရင်းလာရင်း
ပိတ်ရက်တွေမှာအေးဂျင့်တွေနဲ့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ့်အိမ်တွေလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကြုံခဲ့တာ
အေးဂျင့်မ တစ်ယောက်နဲ့ အိမ်၁အိမ်ကြည့်ရင်းနဲ့ သူကကိုယ့်ကို Local လားတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရုတ်လားတဲ့ မဟုတ်ဘူးမြန်မာပါဆိုတော့ ဒါဆိုမြန်မာလိုတတ်မှာပေါ့တဲ့ အင်းပေါ့ ..
စိတ်ထဲကတော့မြန်မာလိုမတတ်ဘူး ပြင်သစ်လိုပဲတတ်တာလို့ ဟိဟိ...
ဒါနဲ့ ပွဲစားထုံးစံအိမ်ကဘယ်လိုကောင်းတယ် ဘယ်လိုတန်တယ်တွေအပြီးမှာ
ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာစာလေးဘာသာပြန်ပေးပါတဲ့ ..
ဟုတ်တယ် တစ်ချို့ မြန်မာတွေကလည်းမလွယ်ဘူး သူငယ်ချင်းတွေကိုမဟုတ်တာသင်ပေးတာ..
ဒီလိုပြောတာဟာ နုတ်ဆက်တာဆိုပီး မဟုတ်တာတွေသင်ပေး ....
ဟိုကမသိတော့ အသံပြဲကြီးနဲ့ လိုက်ရွတ် ..ကြားရတာတော်တော်ဆိုးတာ..
အဲဒါနဲ့ ဇတ်ကြောင်းပြန်ဆက်ရရင် ..အဲဒီပွဲစားမက ဖိုင်တွဲထဲက စာရွက်တွေထုတ်လာ ..
လားလားကြည့်လိုက်တော့ လက်ရေးမူစာတွေကို ကော်ပီဆွဲလာတာ..
သူ့ ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကသိတယ် အင်းငါ့အိမ်အကူလေးရဲ့စာတွေပါတဲ့
မဖတ်သေးပဲကိုင်ထားပြီး ဘာလို့ နင်ကသူများစာတွေသိခြင်တာလည်းလို့ မေးလိုက်တယ် ..
သူက .. ဟုတ်ပါဘူးဟယ်တဲ့ ဒီမှာကြည့်သူက ငါ့အိမ်ကိုဘယ်လိုလာရမယ်ဆိုတာပါ မြေပုံဆွဲထားတယ်တဲ့
ကြောက်လို့ ပါတဲ့..သူ ဘယ်သူနဲ့ များချိန်းနေလဲတဲ့
အဲတော့မှာ စာဖတ်ပေးမယ်ဆိုကြည့်လိုက်တယ် ...မဟုတ်ရင်မဖတ်ပေးဘူး
မြေပုံဆွဲထားတာလည်းတွေ့ လိုက်လို့ လေ..
နောက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူ့ ယောက်ျားကို သူဘယ်လို နေရာမှာလုပ်ရတယ်ဆိုတာပြောထားတာ
သိအောင်သရုပ်ဖော်တယ်ပေါ့နော် စိတ်မပူအောင်ပေါ့..ဒီမိန်းမရဲ့ကလေးတွေနာမည်လေးတွေလည်းပါတယ် အိမ်လိပ်စာလည်းမပါပါဘူး ..
ဓါတ်လှေကားဆိုတာဘယ်ခလုပ်နှိတ်ရတယ်ပေါ့ ( close , open )စသည်ဖြင့်ရေးထားတယ် ..
အိမ်ကိုမြေပုံဆွဲထားတာကလည်းအကြမ်းပါ ..အိမ်ဟာဘယ်လို ပုံပေါ့လေ..
စာဖတ်ပြီးတွေ့ လိုက်ရတာက အဲဒီမိန်းကလေးက ပညာတတ်ပဲ လက်ရေးလက်သားသပ်ရပ်တယ် ရှင်းတယ်
ဘုရားတရားလုပ်ဖို့ သူလည်းမှန်မှန်ဘုရားတရားလုပ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတယ် ..
တနေ့ သူ့ အမျိူးသားလည်း ဒီကိုအလုပ်လာလုပ်မယ့်ပုံပေါ်တယ်
ဒါနဲ့ ပြောလိုက်တယ် သူ ဘုရားတရားလုပ်တယ်လို့ ရေးထားတယ်ဆိုတေ့ာ အေးဂျင့်မက ဟုတ်တယ်တဲ့ တနေ့ တနေ့ ဘုရားရှိခိုးနေတာတဲ့ တော်လည်းတော်တယ် ငါ့ကလေးတွေလည်းစောင့်ရှောက်တယ်တဲ့
ပြီးတော့စာထဲမှာ အိမ်ရှင်ကလခကို သိမ်းပေးထားတယ်လို့ ပါတယ် ..
၆လတစ်ခါထုတ်ပေးမယ်တဲ့ သူက အိမ်ကို ၃လ ၁ခါလောက်ပို့ ခြင်တယ်တဲ့
ဒါပေမယ့်မပြောရဲသေးဘူးတဲ့ရေးထားတာတွေ့ လိုက်တယ်..
အဲဒါနဲ့ သူ့ ကိုလခဘယ်လို ပေးရလဲဆိုပြီးမေးရင်းက
သြော် သူမှာအဲလိုပေးရမှာတွေရှိတယ်လားတဲ့.. သြော်မှားပါတယ် မိသားစုအဝေးမှာလာလုပ်ရတာ အပျော်လာလုပ်နေတယ်မှတ်လားမသိဘူး ..
စာဖတ်ရသလောက်ကဘာမှ ပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ ဆိုတေ့ာ အေးပါသူတော်တော်လေးတော်ပါတယ်တဲ့ မြေပုံတွေ့ လို့ လန့် လို့ ပါတဲ့ ..
တော်ပါသေးတယ် ဘာမှလည်းမဟုတ်လို့ ၃ စောင်လောက်ဒီလိုတွေပါပဲ ..
ဒါပေမယ့်ကိုယ်မသိတာက ဒီစာတွေကို သူကအိမ်ရှင်ကိုပြပြီးမှပို့ ရတာလား
သူပဲစာပို့ ပေးနေကြကနေမြေပုံတွေ့ မှ လန့် လို့ ကော်ပီယူထားတာလား
မမေးလိုက်ရဘူး နောက်တနေရာမှာ နောက်တစ်အိမ်ကြည့်စရာရှိတာနဲ့ 
သူတို့ လေးတွေအတွက် မောတယ် သက်လှယ်ရယ်
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ပြန်တွေးတော့လည်း မောတယ် မျက်ချယ်ရယ်
အားလုံကို ပြန်ခြုံငုံစဉ်းစားမိတော့ ကံကောင်းပါရစေလို့ဆုတောင်းမိတယ် ခက်နွယ်ရယ်
သွားရင်းလာရင်း ဖတ်ပြီးသွားပြီ ဗစ် အောက်က ဆန်းမီပိုး ကွန်မန့်လေးလဲ ဖတ်သွားပါတယ် :)
အရင်က ငါအိမ်ကိုစာပို့ချင်ရင် ဒါမှမဟုတ် အိမ်ကစာလာရင် သူတို့ကအရင် ဖတ်တယ် နားလည်တာလဲမဟုတ်။ နောက်မှသိတာ သူတို့က ကော်ပီယူယူထားတယ်။ စာကိုဒီညနေလာရင် နောက်နေ့ညနေမှ ပြန်ပေးတယ်။ အဲလိုမျိုးဟ။
တို့နိုင်ငံက ပညာတတ်မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဘယ်လောက်တောင်အဲလိုဘဝ ရောက်နေပြီလဲ မသိတော့ပါဘူးဟယ်။
အဲလိုထင်တယ် ကော်ပီကူးထားတာလေ ..အများကြီးပဲ စာတွေ
October 22, 2009 at 2:07 AM
Steve Evergreen Says:
October 23, 2009 at 3:18 AM
But I haveabig concern about privacy and confidentiality in Singapore. In our country, we can't enter au pair's room without permission. We must not open or read someone else's letter.
သနားလို့ ကောင်းလိုက်တာနော်။ သူလည်း သိမှာပါ။ သူများကို ပြန်ပြတော့မယ် ဆိုတာ။ ကိုယ့်ရင်ထဲ ရှိတာလေးတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောခွင့်မရရှာဘူး။
ရွာကနေ လာလုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ဖုန်းပြောရတော့ သူ့သားလေးတွက်ငွေလွှဲချင်တယ်လို့ အိမ်ရှင် မလေးမကိုပြောတော့ ဘာလို့လွှဲနေမလဲ.. နင့်ဘာသာနင် ဒီမှာ စုထားပါလားလို့ေ ပြာတယ်တဲ့။
ူသူ့သားလေးက ၄ နှစ် ဆေးရုံတက်ရတယ်ဆိုလို့.. ယောက်ျားက ဘီအီး မယ်ကယ်နီကယ်၊ သစ်မှုနဲ့ ထောင်ထဲရောက်နေတာ